Sangano Rako Rakagadzirira Kushandisa Huru Dhata? | Martech Zone
Big Data ndiko kushuvira kupfuura chokwadi kumasangano mazhinji ekutengesa. Kubvumirana kwakazara pamusoro pekukosha kwekukosha kweBig Data kunopa nzira kumakumi ezviuru emanzungu-uye-mabhaudhi ehunyanzvi nyaya dzakakosha kuronga dhata rezvinhu uye nekuunza yakajeka data-inotungamirwa nzwisiso kune hupenyu mukutaurirana kwakasarudzika.
Unogona kuongorora kugadzirira kwesangano kukwirisa Big Data nekuongorora kugona kwesangano munzvimbo nomwe dzakakosha:
Strategic Vision ndiko kugamuchirwa kweBig Data semubatsiri akakosha kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi. Kunzwisisa kuzvipira kweC-Suite uye kutenga-mukati ndiro danho rekutanga, rinoteverwa nekugoverwa kwenguva, kutarisa, kukosha, zviwanikwa, uye simba. Zviri nyore kutaura hurukuro. Tarisa kutsarukana kunowanzoitika pakati pevakuru vatungamiriri vanoita sarudzo dzakasarudzika uye vanoshanda maseru masayendisiti, vaongorori ve data uye vatengesi ve data-centric vanoita basa racho. Kazhinji kacho sarudzo dzinoitwa pasina zvakakwana zvekushandisa-chikamu. Kazhinji, iwo maonero kubva kumusoro uye iwo maonero kubva pakati akasiyana zvakanyanya.
Dhata ecosystem inogona kuva chigumbuso kana chinogonesa. Makambani mazhinji akabatwa nehurongwa hwenhaka uye kudyara kwakanyura. Haasi mafemu ese ane yakajeka remangwana chiono chakatemerwa kune aripo mapombi. Kazhinji pane kupesana pakati pevashandi vetekinoroji yeiyo IT nzvimbo nevashandisi vebhizinesi avo vari kuwedzera vanobata mabhajeti anoenderana. Muzviitiko zvakawanda, iko kumberi kuona ndiko kuunganidzwa kwema workaround. Kuwedzera mukukanganiswa iyi makambani mazana matatu nemazana mashanu + anopa mhando dzese dzekombiki kugadzirisa zvirevo zvakafanana, vachishandisa mutauro wakafanana nekupa madhiri akafanana
Utongi hweData zvinoreva kunzwisisa dhata dhata, kuve nehurongwa hwekumedza, kuomesa, chengetedzo uye kuisa pamberi. Izvi zvinoda musanganiswa weagile chengetedzo matanho, yakatsanangurwa yakajeka mvumo yekutonga uye nzira dzekuwana uye kutonga. Hurumende inotonga kudzikamisa zvakavanzika uye kutevedza kushandiswa kunochinjika uye kushandisa zvekare dhata Kazhinji kacho nyaya idzi dzinosanganiswa kana kusunganidzwa pamwe chete nemamiriro ezvinhu pane kuratidza marongero akagadzirwa zvakanaka nezvibvumirano.
Zvakashandiswa Analytics chiratidzo chekuti mashandiro akaita sangano zvakadii analytics zviwanikwa uye anokwanisa kuunza huchenjeri hwekugadzira uye muchina kudzidza kutakura. Mibvunzo yakakosha ndeiyi: sangano rine zvakakwana here analytics zviwanikwa uye zviri kuendeswa sei? Vari analytics yakamisikidzwa mukushambadzira uye zvine hungwaru workflows, kana kubatidzwa pane yekupedzisira hoc hwaro? Vari analytics kutyaira kwakakosha bhizinesi sarudzo uye kutyaira kugona mukuwana, kuchengetedza, kudzikisa mutengo uye kuvimbika?
Technology Zvivakwa inoongorora iyo software uye data zvimiro zvinoshandiswa kumedza, kugadzirisa, kuchenesa, kuchengetedza uye kugadzirisa mafashama e data achiyerera mumakambani mazhinji. Zviratidziro zvakakosha idanho rekushandisa uye kugona kuisimbisa seti yedata, kugadzirisa kuzivikanwa kwemunhu, kugadzira zvikamu zvine musoro uye kuramba uchingopinda nekushandisa data nyowani-yenguva. Zvimwe zviratidzo zvakanaka mubatanidzwa neESP, kushambadzira otomatiki, uye gore komputa vanopa.
Shandisa Nyaya Kukura inoyera kugona kwesimba kushandisa chaizvo dhata ravanotora nekugadzirisa. Vanogona here kuona vatengi "vakanakisa"; kufanotaura zvinotevera zvinopihwa kana kukurudzira vangangove vakavimbika? Vane nzira dzakasimukira dzekugadzira mameseji akasarudzika, kutora chikamu chidiki, kupindura maitiro mune nhare kana pasocial media kana kugadzira mishandirapamwe yezvinyorwa zvakaunzwa munzira zhinji?
Kugamuchira Math Varume chiratidzo chetsika yemakambani; chiyero chechido chechokwadi chesangano chekutarisa, kutora uye kuwana nzira nyowani uye matekinoroji matsva. Wese munhu anotsvaga rhetoric yedhijitari uye data shanduko. Asi vazhinji vanotya WMDs (zvombo zve math kukanganiswa). Makambani mashoma kwazvo anodyara iyo nguva, zviwanikwa nemari kuti data-centricity ive yakakosha yemabhizimusi. Kusvika kuBig Data kugadzirira kunogona kutora nguva yakareba, kunodhura uye kunetesa. Iyo inogara ichida shanduko dzakakomba mumaonero, mafashama ebasa, uye tekinoroji. Ichi chiratidzo chinoyera kuyedza kwechokwadi kwesangano kune ramangwana dhata rekushandisa zvinangwa.
Kuziva iwo mabhenefiti eBig Data chiitiko mukuchinja shanduko. Aya maitiro manomwe anotigonesa kuwana yakajeka-yeziso pekuti pane pane shanduko spectrum sangano rakapihwa rinowira. Kunzwisisa paunenge uchipesana nekwaunoda kuve kunogona kubatsira kana kurovedza muviri kuchidzikamisa.
Tags: yakashandiswa analyticsbig datahombe data zvivakwahombe data rekushandisa kesichange managementkutamba kuburikidza nemuchinjiko wedhijitaridata ecosystemkutonga kwe datamasvomhumasvomhuchiratidzo chehunyanzvitekinoroji zvivakwakesi yekushandisa
ClearVoice: Iyo Yemukati Yekufambisa Workplatform Yekuronga, Kuhaya, Kugadzirisa, uye Kudhinda